The Best Places N'ihi Harry Potter Weekend Na London | Save A Train
Home > Travel Europe > The Best Places N'ihi Harry Potter Weekend Na London
(Emelitere ikpeazụ On: 01/01/2021)
Harry Potter fim ndị ihe ịga nke ọma film usoro niile oge. A gbara ọtụtụ ihe nkiri si na Harry Potter nkiri n'ime London n'onwe ya. Ma ị bụ onye na-anwụ anwụ na-akwado ihe nkiri Harry Potter ma ọ bụ usoro akwụkwọ, London bụ doro anya na ebe kasị mma ileta maka ezigbo Harry Potter ahụmahụ. Chọrọ ịmata ihe 5 Ebe ileta gị Harry Potter Weekend na London? Save A Train ka weere a ndepụta mee ka gị na wizarding njem mfe na ndị ọzọ na-akpali akpali otu!
Nke a bụ kacha ahụmahụ anyị akwụkwọ! Lee mbụ aka na tent, ekike, na props eji na niile Harry Potter fim! Nzọụkwụ n'ime ụfọdụ nke ebe nke film tinyere; The Great Hall, Dumbledore ọrụ, na ụlọ Hagrid.
Ebe ahụ a? gaba na n'elu ka Warner Bros. Studios Tour London. The Ime nke Harry Potter bụ a ọha na eze na mma ke Leavesden South England. Ghara inwe mgbagwoju anya na Wizarding World of Harry Potter nke Universal Studios ogige ntụrụndụ. Ọ bụ a na-adịgide adịgide ngosi àjà ezigbo n'azụ Mpaghara ghọta nke Harry Potter fim. Nwere a kpokọtara ụbọchị na a n'azụ Mpaghara njem nke Harry Potter fim na Warner Bros. Studio Tour London.
2. Harry Potter Weekend: Jidere ụfọdụ Merch Mgbe Platform 9 3/4
Eze Cross Station bụ, n'ezie, ọpụpụ ebe maka ụmụ akwụkwọ nke Hogwarts School of Ịta Amoosu na Wizardry, nke ya kasị ama amụrụ, Harry Potter, agakwa. The Hogwarts Express departs si Platform 9 ¾.
N'ime Eze Cross Station, isi ọdụ ụgbọ okporo ígwè na London maka ụgbọ oloko na Edinburgh na Scotland, a njegharị mma A chọpụtawo, na a ibu Trolley ọkara agbakwunyere na mgbidi, ebe ị nwere ike re-eweputa gị onwe gị na Harry Potter oge.
Iji zọpụta ndị mkpọchi na queues nke ndị mmadụ, a ugbu a na a hụrụ na isi ulo nke ebe Eze Cross ojii, abụghị n'etiti nyiwe 9 na 10 ka ị pụrụ iche.
Between the hours of 9 am and 9 pm ị nwere ike ịkwụ nwere a ọkachamara-echebe na otu nnyemaaka enyemaka ị na-ahụ foto kacha mma enwere, zuru ezu na Harry Potter ịchafụ na / ma ọ bụ wand. Ị nwere ike ka na-gị onwe gị na foto ebe a maka free.
Ọ bụrụ na ị nwere ike na-gaa n'oge elu oge na nwere ego mapụtara, ị nwere ike ịchọrọ ịtụle lanyard VIP Photo Pass. Nke a na-agụnye a n'elu ikpo okwu 9 ¾ lanyard, foto gị, ma kwụba n'ahịrị, niile maka £ 20.
The ebe bụ ugbu a n'ụlọ a Harry Potter shop aha ya bụ Platform 9 3/4 ebe ị ga-ahụ ihe niile nke gị wizarding wares. Ị pụrụ ọbụna ịzụta a ahaziri Hogwarts akwụkwọ ozi ebe a maka £ 15 ma ọ bụ ọbụna a ahaziri Hogwarts ogwe maka £ 65!
Calais na London Ụgbọ oloko
Bruges na London Ụgbọ oloko
3. Mụrụ: The Wizard Chamber Mgbe The Georgian House Hotel
Ọ bụla n'ime ụlọ atụmatụ ugegbe windo, nkume mgbidi, na anọ posta akwa, mgbe osisi na-ere stoves, cauldrons, na tapestries mezue enchanting picture a London hotel. Ọ na-ekwe nkwa iji mee ka ị na-eche kpokọtara.
Ghent na London Ụgbọ oloko
Middelburg na London Ụgbọ oloko
Leiden na London Ụgbọ oloko
4. Harry Potter Weekend: Nwere A ṅụọ na The cauldron
Gịnị bụ a Harry Potter Weekend na London na-enweghị agbali a cauldron? Nke a kpokọtara mmanya Ahụmahụ bụ a 1 Ọrụ Nchịkwa 45 min immersive klas na London. Don gị uwe mwụda, jidere gị wands, ma kwadebe maka klas gị nke kachasị mmụọ, na a immersive kpokọtara mmanya Ahụmahụ abụọ na The cauldron, London.
Mgbe gị na mmekọrịta na-arụ ọrụ ebe, ị ga-esi na-anwale gị anwansi wand site agbapụtara a gị ihe ọṅụṅụ. Ị ga ahụ na-eji pụrụ iche molekụla mixology nkà ime biya gị na-atọ ụtọ elixirs, ọ bụla nke ga-enwe dị iche iche àgwà na mmetụta. Jikere mix ụfọdụ anwansi na London kasị enchanting mmanya ahụmahụ!
1 hour 45 nkeji immersive kpokọtara mmanya ahụmahụ abụọ na The cauldron, London
Arụ ọrụ anwansi wands na uwe mwụda nyere
Mepụta atọ ọṅụṅụ iji molekụla mixology
Mmanya-free, gluten, na vegan nhọrọ niile dị
Ahụmahụ onyinye mkpọ tinyere ahaziri ndepụta ego na ozi kaadị
Den Helder na London Ụgbọ oloko
Maastricht na London Ụgbọ oloko
Bonn na London Ụgbọ oloko
5. Lee nlegharị anya Site The akwụkwọ na fim On A Muggle eje Tour
The 2.5 hour Muggle eje Tour-ekpuchi ọtụtụ ndị London akara kwuru okwu ya na akwụkwọ, na nsonye Number 12 Grimmauld Place na Ministry of Magic. Ị ga-gaa n'okporo ámá na-alleys na ndị n'ike mmụọ nsọ n'ihi na ọtụtụ nke usoro ọnọdụ ndị dị otú dị ka; Diagon uzo warawara na Knockturn uzo warawara. Otú ọ dị, anyị hụrụ n'anya otú a tour bụghị naanị ihere. Ọ na-enye ihe ọmụma banyere ụfọdụ nke akụkọ ihe mere eme na saịtị ị ga-agafe n'ụzọ.
Düsseldorf na London Ụgbọ oloko
Essen na London Ụgbọ oloko
Munster na London Ụgbọ oloko
Leuven na London Ụgbọ oloko
Mmetụta n'ike mmụọ nsọ ike gị kpokọtara ị gburugburu London? Jiri anyị ndepụta 5 Ebe ileta gị Harry Potter Weekend na London, ugbu a. Akwụkwọ gị tiketi nkeji na-enyemaka nke Save A Train!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Places Iji Gị N'ihi na gị na Harry Potter Weekend Na London” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fharry-potter-weekend-london%2F%3Flang%3Dig– (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#HarryPotter njem europetravel HarryPotterfilms London travelbytrain wizard